तपाईंको रक स्टारहरू चम्काउनुहोस् Martech Zone
आइतबार, डिसेम्बर 4, 2011 Douglas Karr
ड्यूक लांग रन एक वाणिज्य घर जग्गा ब्लग र हालसालै मलाई Google+ ह्याoutआउट मार्फत उहाँको शो मा साक्षात्कार। विषय एक महत्त्वपूर्ण हो ... एक उद्योगमा जहाँ नेताहरू प्राय: कन्ट्रोल, गणना, र… सायद… केही अहंकारका साथ तपाईं कसरी गर्नुहुन्छ नियन्त्रण सन्देश?
सरल भाषामा भन्नुपर्दा, तपाई नियन्त्रण सही व्यक्ति भर्ना गरेर सन्देश दिनुहोस् जुन उनीहरूमा महान् छन्। व्यावसायिक रियल इस्टेटमा, उद्योग अधिकार र एजेन्टहरू विकास व्यवसाय सम्बन्ध उनीहरूको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छ। यस नेटवर्कलाई सामाजिक विस्तार गर्नु निरपेक्ष आवश्यकता हो। तपाईंको रक तारा चम्काउन दिनुहोस्!
यहाँ कुराकानी छ ... केहि bleeps संग हामी अपमान गर्दैनौं सुनिश्चित गर्न को लागी:
कम्पनीहरू चिन्तित छन् कि यदि एक कर्मचारी एक रक स्टार को रूप मा देखियो भने, तिनीहरू केहि तरिका नियन्त्रण छोड्दैछन्। अनुमान गर्नुहोस्, तपाई सधैं नियन्त्रण त्याग्नुहोस्। ग्राहकहरू बुझ्दछन् कि मानिसहरू आउँछन् र जान्छन् ... विशेष गरी प्रतिभाशालीहरू। यदि तपाइँ चिन्तित हुनुहुन्छ कि तपाइँको रक स्टारले छोड्न सक्छ र तिनीहरुसँग नेटवर्क लगेको छ भने तपाईलाई के गर्नु पर्छ उनीहरुलाई राख। तर यदि तिनीहरू जान्छन्, तिनीहरू जान्छन् कि जाँदैन कि भनेर तपाइँले एउटा ट्विटर खाता राख्नुहुन्छ।
नाफा कमाउने र बढाउने अवसरले सोशल मिडियामा तपाईंको रक स्टारहरू चम्काएर तपाईंको कर्मचारीहरूलाई खोरमा राखेर उनीहरूलाई कुनै नियन्त्रण वा अवसर छैन जस्तो लाग्छ। त्यो, नवाचार, संचार, र व्यापार को घाटाको साथ तिनीहरू सामाजिक मिडियाबाट प्राप्त गर्न सक्छन् पक्कै पनि विपत्तीको लागि एक विधि हो।
टैग: अख्तियारवाणिज्य घर जग्गाअचल सम्पत्तिरक तारा